ဇွန်လိုင်လမှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ Xiaomi Mi Max3– AsiaApps
May 22, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ဇွန်လိုင်လမှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi အနေနဲ့ Mi Max2ကိုမိတ်ဆက်ပြီး တစ်နှစ်အကြာ လာမယ့်ဇွန်လိုင်လမှာတော့ Mi Max3ကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လိုင်လမှာစတင်မိတ်ဆက်မယ့်အကြောင်းကိုတော့ Xiaomi ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Lel Jun ဟာ Weibo Network ကတဆင့်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mi Max2တုန်းက မေလမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လရောက်မှစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့… Mi Max2အတိုင်းသာဆိုရင် လာမယ့် Mi Max3ကိုလည်း ဇူလိုင်လမှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့ မျှော်မှန်းထားနိုင်မှာပါ။ (သိပ်တော့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ?)
Lel Jun ကတော့ Mi Max3ကိုလာမယ့်ဇွန်လိုင်လမှာ မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိပေမယ့် အဆင့်သင့်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လက်ငင်းဖုန်းဝယ်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Mi Max2ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max3ဟာ mid-range စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားထဲကဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား ၇ လက်မအထိရှိနေပါတယ်။ (တော်တော်လေးကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။) FHD+ display ကိုအသုံးပြုထားပြီး ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာ Dual ကင်မရာပါဝင်ပါတယ်။ Snapdragon 636 processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး 3GB RAM, 64GB internal storage နဲ့ရောက်ရှိလာမှာပါ။ (Storage ကတော့ version အမျိုးအမျိုးထွက်ရှိလာမှာပါ။) ဒါ့အပြင် Snapdragon 660 CPU အသုံးပြုထားတဲ့ version ကိုလည်းမိတ်ဆက်သွားဉီးမှာပါ။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ Mi Max3ရဲ့ Spec ကို Xiaomi ကတရားဝင်အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် Rumor အဆင့်သာရှိသေးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
Xiaomi ဖုန်းလဲချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရော ဘာလုပ်ကြမှာလဲ…. Mi Max3ကိုအချိန် ၂ လလောက်ထိုင်စောင့်မလား ? (သို့) Lel Jun ပြောသလို Mi Max2ကိုပဲပြေးဝယ်လိုက်တော့မှာလား ??
Under-display fingerprint sensor ပါဝင်လာမယ့် Xiaomi ရဲ့ နောက်ထွက်မယ့် flagship ဖုန်း